That's so good, right?: I Never Lose A Bet
မျှော်လင့်စောင့်စားခြင်းက ကျွန်တော့်ကိုခံရခက်စေပါတယ်။ ဒီငနဲကို ကျွန်တော်ရနိုင်တာပေါ့။ အဲဒါကို သိနေပါတယ်။ သူက တကယ့်ကို တောက်ပ၀င့်ကြွားလွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အုပ်စုရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာကနေ သွေဖည်ပေမဲ့ စိန်ခေါ်ရတာကို ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်က တစ်ခုခုကိုလောင်းလိုက်ရင်ရှုံးတယ်ဆိုတာရှိမှမရှိခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲငယ်လေးမှာ သူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ကျိတ်ရယ်နေတဲ့ ပိုင်စိုးရဲ့ကျိတ်ရယ်နေတဲ့အသံကို နောက်ဘက်ကနေကြားနေရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အရှုံး မပေးချင်ဘူး။
ကျွန်တော်နှင့် ပိုင်စိုး 'ညမွှေးပန်း'ကလပ်ထဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စနောက်ကာဝင်လာရင်း ၀င်ပေါက်ကိုဖြတ်လာတဲ့တစ်နာရီကြာ လောက်ကတည်းက သတိပြုမိကြတဲ့ သူတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီလူ ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သေချာပေါက် ပြောနိုင်တယ်လေ။ အရပ်အမြင့်က ၆ပေ၂လက်မလောက် အနည်းဆုံးရှိတယ်ဗျ။ အညိုရောင်သမ်းတဲ့ အသားအရေနှင့် စတိုင်လ်အရမ်းမိ တဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်ပိုင်ရှင်။ ကျယ်ပြန့်တဲ့ပခုံး၊ မို့မောက်တဲ့ရင်အုပ်နှင့် အဖုအထစ်ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို သူဝတ်ထားတဲ့ T-shirt ကနေ မြင်နေရ တယ်။ သူ့မျက်နှာကို ကျွန်တော်မြင်ရချိန်မှာတော့ အဲဒီလူဟာ perfect ဖြစ်လုနီးပါးလူတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာသွားရပါရဲ့။ ကျွန်တော့်လက်ထဲ က ကော့တေးလ်ကိုမော့သောက် စိတ်ထဲကသတ္တိစိတ်ကိုနှိုးဆွရင်း သူ့ဆီသွားဖို့ ပြင်ဆင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဘားမှာလူစိမ်းတွေနှင့်တွေ့ဆုံနေရတာ အခုမှ လက်သင်ပဲရှိသေးတာဆိုတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ အသက်အရွယ်နှင့် လုပ်သင့်မလုပ်သင့် စဉ်းစားနေမိတာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ရူးရူးမိုက်မိုက်ပဲ ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်တွေ အား ကိုးပြီး အခုလိုအလောင်းအစားမျိုး မကြာခဏလုပ်ခဲ့ဖူးတာ။ အခုအသက်က ၂၀ကျော် ၅နှစ်စွန်းပြီဆိုတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက မယုံချင်ကြတော့ဘူးထင်ပါ့။ ဒီည သန်းခေါင်မှ သူနှင့်ကျွန်တော်အတူ မအိပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် စားသောက်သမျှရယ်၊ အထင်ကြီးခံရသမျှ အားလုံးဆုံးရမှာပါ။
ကျွန်တော် သူ့ဆီကို သာမန်တွေ့ဆုံနေကျလူတစ်ဦးကို ဆက်ဆံသလိုမျိုး စကားပြောဆို မိတ်ဆက်ရတာပေါ့။ သူ့အမြင်မှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ sexy ဖြစ်တယ်လို့မြင်အောင်ရယ်၊ ပြီးတော့ သူ့ကိုမြှူဆွယ်ရာလည်း ရောက်အောင်လုပ်ရပါတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ကျွန်တော့် ဦးတည် ချက်အတိုင်း ၀င်လာသလို ညှို့အားပြင်းတဲ့ တုန့်ပြန်ကြည့်တွေနှင့် ကျွန်တော့်ကိုပြန်ကြည့်ပါရဲ့။ သူ့မျက်လုံးတွေက လှလိုက် တာ၊ မျက် တောင်ရှည်တွေကကော့နေတာများ မိန်းကလေးတွေရှုံးမယ်။ သူ ကော့တေးလ်ဖန်ခွက်လေးကို နှုတ်ခမ်းမှာတေ့ချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့် အတွေးကို စုစည်းဖို့အချိန်ရလိုက်ပါတယ်။ သူ့အနားကို အသာတိုးကပ်သွားတော့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အမျိုးသားအတော်များ များရဲ့ ၀န်းရံ ထားခြင်းခံနေရတာကို သတိပြုမိရပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးမိရတာက ကျွန်တော် ဒီထက်ပိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်ရောက်တော့လည်း သူ့နားမှာလူတွေ ကြပ်သိပ်နေတာ ကျွန်တော်တောင် မနည်း သူ့နားတိုးရတယ်။ ပျံ့လွင့်ချင်တဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေကို ပြန်စုစည်းရင်း ရင်းနှီးမှုရအောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားရပါတယ်။ ကရင်းတစ်ခါတလေ ယိုင်လဲသလိုတောင်ဖြစ်ရတာ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ပခုံးမှာ မှီလျက်တွေ့ရတာပေါ့။ အခုအချိန်မှာ သူ့ကိုသာ ကျွန်တော်မရရင် သွားပြီ ပါသမျှ ပိုက်ဆံကုန်မှာ။ သူ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြည့်တွေနှင့် စိုက်ကြည့်တယ်။
'ခင်ဗျား ကျုပ်ကိုကြည့်နေတာကြာပြီ' အသံက စူးစူးနင့်နင့်ဖြင့် ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားသလို သူပြောပါပြီ။
သူ အားရပါးရပြုံးတယ် အဖြူရောင်သွားတွေပေါ်တဲ့အထိ။ ဒါဟာ အနာအဆာဖြစ်တယ်လို့ ထောက်ပြစရာ သူ့ဆီမှာမရှိပါဘူး မမြင်ရဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ ဂီတသံနှင့်အတူ လှုပ်ရှားယိမ်းထိုးနေကြတာမှာ သူ့ကို ကျွန်တော်နောက်ထပ် ဘာပြောရမှန်းမသိ။
'ကျွန်တော်က Alex ပါ' ရို့ကျိုးတဲ့ပုံ၊ လှိုင်းထနေတဲ့ပုံဟန်မပေါ်အောင် ကြိုးစားရင်းပြောလိုက်တယ်။
'Theo' သူ့လက်ကိုဆန့်တန်းပေးရင်းဖြေတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်လေးမှာကျွန်တော် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို မသုံးခဲ့မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ လက်ကို အသာဆုပ်ကိုင် လှုပ်ရမ်းပြီး ယုံကြည်မှုကို ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီဘားထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကဲလို့ရမယ့်နေရာကို ကျွန်တော် မမြင်ရပါဘူး။
'ဒီမှာ လူတော်တော်များတယ်နော်။ စကားအေးအေးဆေးဆေး ပြောလို့ရအောင် ကျွန်တော့်နေရာကို လိုက်ခဲ့နိုင်မလား?'
ကျွန်တော့်အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားရင်း သူ့တုန့်ပြန်ချက်ကို စောင့်စားပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကိုတော့ ကိုယ့် ဖာသာကိုယ်ပြင်ဆင်လက်ခံထားရတာပေါ့လေ။ အရှက်သည်းစွာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေစီ လှည့်ပြန်ရမလားပဲ။
သူ့ဆီက အဖြေစကားကြားရတာ ထင်တောင်မထင်မှတ်ထားခဲ့ပါ။
'Sorry, မင်းဘာပြောတာလဲဟင်?' ကျွန်တော်နားကြားမှားသလား သူ့ကိုထပ်မေးဖြစ်ပါတယ်။
သူအဖြေမပေးတော့ပါ။ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲကိုင်ကာ ကလပ်ထဲကနေ ဦးဆောင်ခေါ်ငှင်သွားပါပြီ။ ကျွန်တော် သူ့ပခုံးကိုကျော်ပြီး ပိုင်စိုး ရဲ့ လက်မထောင်ပြမှုကို လမ်းမပေါ်မရောက်ခင်မြင်လိုက်ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သဘောကျရယ်မောမိပေမဲ့ Theo ကျွန်တော့်ကိုမျက်ခုံးပင့်အကြည့်ရောက်ချိန်မှာတော့ ချောင်းတစ်ချက်စိုးဟန်ပြပြီး အာရုံလွှဲရတယ်လေ။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား လမ်းအတူလျှောက်ကြရင်း စကားစမြည်ပြောဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားရတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်အရပ်က ၅ပေ ၁၁လက်မ ဆိုတော့ အရပ်ပုတဲ့အထဲမပါဘူး ထင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ Theo ကိုစကားပြောဖို့ မော့ကြည့်ရပါတယ်။ သူက စကားသိပ်မများတတ်သူဆို တော့ ကျွန်တော်လည်း စကားပြောအရှိန်ကိုလျော့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်ကိစ္စတွေကိုပဲ ဖြတ်သန်းဖြစ်ကြတာပါ။ သူ့အသက်က ၂၆နှစ် ၊ကြော်ငြာအေဂျင်စီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တယ်၊ တကယ့်ကိုရည်းစားမရှိ Single ဆိုတာ ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ဘာတွေပိုပြီးပြောရမလဲ သိပ်မသိခဲ့ပါ။ တခြားသူများလို လိမ်ညာတာမျိုးမပြုလုပ်ချင်တာကတော့ ထူးဆန်း ချက်။ ကျွန်တော်တို့ မကြာခင်မှာပဲ နေထိုင်ရာအဆောက်အအုံကို ရောက်ရှိကြပါတယ်။ အခန်းရှိရာကို တက်ဖို့ ဓာတ်လှေကားနံပါတ် ကိုတော့ ကျွန်တော်နှိပ်ရတာပေါ့လေ။
အသက် ၂၅ ကျွန်တော့်မှာလည်း အရာအားလုံးပြည့်စုံသလောက်ရှိနေပါပြီ။ အလုပ်အကိုင်ကောင်းကောင်း တစ်ခုရှိသလို ချမ်းသာတဲ့မိဘ များရှိခြင်းကြောင့် အကောင်းစားတိုက်ခန်းမှာ ကျွန်တော်နေနိုင်ခြင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်မှာလည်း သင့်လျော်တဲ့ boyfriend တစ်ယောက်ဆို တာ မရှိခဲ့ပါဘူး အပျော်သက်သက်တွေ့ဆုံခြင်းက များခဲ့တာကိုး။ အထင်တော့မမှားပါနဲ့ဗျာ ကုန်ဆုံးမယ်အချိန်တွေကို အတူဖြတ်သန်း ချင်စေမည့် အမျိုးသားတစ်ယောက်ဆိုတာကို ကျွန်တော်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုထိတွေ့မှမတွေ့ရသေးတာ။
အခန်းတံခါးကိုဖွင့်လိုက်ချိန်မှာတော့ ချက်ခြင်းလိုလိုပဲ ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ ဒါကျွန်တော့်နယ်နိမိတ်၊ ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာကိုလုပ်လို့ရတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သီးခြားရှိချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ရပါရော။ လိင်ဆက်ဆံတာ တောင် ကိုယ့်နေရာမှာမှ ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်။ နည်းနည်းတော့ စိုးရိမ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်လိုအပ်ချက်နှင့် တစ် ယောက် ကိုက်ညီပါ့မလားလို့။ ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကြည့်ရတာပေါ့။ နာရီကို ခပ်မြန်မြန်ကြည့်လိုက်တော့ ၁၁နာရီထိုးပြီ။ ကျွန်တော် ၁နာရီအချိန်ရပါတယ်။
ကျွန်တော် နံရံဘက်ကို သူ့ခန္ဓာကိုယ်အား ဖိကပ်စေလိုက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို အလောတကြီး စတင်နမ်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါ သူ့ကို အံအားသင့်နေစေရဲ့။ နှစ်စက္ကန့်လောက် သူ့တုန့်ပြန်မှုကို ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေရပါပြီ ဘာကြောင့်ဆို သူခဏတာငြိမ်သက်သွားတာ ကြောင့်။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာပဲ ပြင်းပြတဲ့အနမ်းတွေနှင့် ကျွန်တော့်ကိုနမ်းပါတော့တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက နုညံ့ပြီး ပူနွေးနေတာပဲ။ နှုတ် ခမ်းသားတစ်ခုခြင်းစီကို ငုံစုပ်ပြီးနောက် ကျွန်တော့်လျှာကို သူ့ပါးစပ်တွင်း သွင်းပြီးမွှေလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်အစုံကတော့ နုညံ့တဲ့ သူ့ရင်အုပ်တွေကိုပွတ်သပ်ရင်း၊ ပြီးတော့ သူ့ပခုံးတွေကို ကျော်လွှားကာ လည်တိုင်ကိုခိုမှီလိုက်ပါရဲ့။ အံ့အားသင့်ဖွယ် နုညံ့လှတဲ့ သူ့ဆံ နွယ်များကိုလည်း ကျွန်တော့်လက်များဖြင့် ပွတ်သပ်လိုက်တာပါပဲ။ သူ့လက်အစုံဟာ ကျွန်တော့်ခါးကိုကိုင် သူ့ဆီဆွဲယူပြီးကပ်ထားပါ တယ်။ သူ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းကို နမ်းနေတဲ့ အနမ်းကို ဖျက်လိုက်ရင်း ကျွန်တော့်လည်တိုင်ကို အနမ်းတံဆိပ်ကပ်ပါ၏။ သူ့ရဲ့နုညံ့လှတဲ့ အနမ်းကြောင့် ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းများကို သုံးလေးစက္ကန့်လောက်မှေးမှိတ်သွားစေပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှ အဲဒီလို ပြုမူမှုမျိုး မခံစားခဲ့ရဖူး။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား ခန္ဓာကိုယ်ကို မကွဲမကွာစေဘဲ အိပ်ခန်းရှိရာကိုရွေ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေကတော့ သူ့နောက်ကျော ပြင်တလျှောက်နှင့် တင်ပါးတွေကို ပွတ်သပ်ရင်း နှုတ်ခမ်းအစုံကတော့ နမ်းရှိုက်လျက်ပေါ့။ ကျွန်တော့်ခြေထောက် နည်းနည်းနာသွားပေမဲ့ အခန်းတံခါးကို ကန်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ကျွန်တော်တွန့်သွားမိပေမဲ့ အရာအားလုံး ဆက်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ပြီးဆုံးသွား ချင်သား။ ကျွန်တော်သူ့လက်အစုံကနေ ဆွဲခွာလိုက်ကာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲလျောင်းသွားစေပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကားယားခွလိုက်ရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေအား ပြန်လည်စတင်အနမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့လည်တိုင်ကို ခပ်ဖွဖွကိုက်ရင်း မေးရိုးတလျှောက် နှုတ်ခမ်းဖြင့် နမ်းစုပ်ရင်း နားသယ်စပ်တလျှောက် လျှာဖျားလေးဖြင့်မွှေရင်းပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီကို ဆွဲချွတ်ပါတယ်။ သူကလည်း လက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ထားပေးကာအဆင်ချောအောင်အလိုက်သင့်။ သူကလည်း အားကျမခံ ကျွန်တော် ၀တ်ထားတဲ့ အနက်ရောင်ရှပ်အင်္ကျီကို တုန့်ဆိုင်းမှုမရှိ ဆွဲချွတ်ပေးပါရော။ နှစ်ယောက်သား အိပ်ယာပေါ်လုံးထွေးလဲကျသွားကာ ခဏ တော့ငြိမ်သက်နေမိကြပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းဆီသို့ အနမ်းရွှေ့ပါတယ် ချောမွေ့သော ဗိုက်သားပြင်တစ်ခုလုံး။ အောက်ခံဘောင်းဘီနှုတ်ခမ်းသား များက ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ်က အစွန်းထွက်နေသလားပဲ။ ကျွန်တော် သူ့ဘောင်းဘီကိုအစပိုင်းမှာ ကြယ်သီးတစ်လုံးခြင်းစီ ဖြုတ်နေပေမဲ့ နောက်တော့ ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဆွဲချွတ်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ Calvin Klein အတွင်းခံဘောင်းဘီဟာ အလယ်ခေါင်မှာ ဖုဖောင်းလို့ သူအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ထကြွနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိရတာ။ ခပ်ပါးပါးဘောင်းဘီအသားပေါ်ကနေ ငပဲကိုပွတ်သပ် ပြီး ကိုင်တွယ်ကြည့်မိပါတယ်။ မဆိုးပါဘူး စံချိန်မှီပစ္စည်းပါပဲ။ ကျွန်တော်ခေါင်းကို အသာငုံ့ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးမှ တစွန်းတစထွက်နေတဲ့ ငပဲခေါင်းကို လျှာဖြင့်လျှက်လိုက်တာမှာ သူ့ရဲ့မိန့်မူးသံဟာ ခပ်ကျယ်ကျယ်ထွက်လာပါရော။ သူ အဲဒါကို ဆက်လုပ်ဖို့ ကျွန်တော့်ကို တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီလူ့အပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းအပေါ် ကျွန်တော်နှစ်သက်မိပါပြီ။
သူဝတ်ထားတဲ့ boxer ဘောင်းဘီတိုကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ် ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်တွေမဖယ်ရှားခင်ပေါ့။ ဘော်ဒါက ထိပ်အရေ ပြား ဖြတ်ထားတာပဲ ကျွန်တော့်အကြိုက် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်။ ၆လက်မနှင့် လက်မ၀က် ထပ်စွန်းသေးတာ။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲ ကို ကိုင်တွယ်တာရော လျှာဖျားလေးနှင့် မာတောင်နေတဲ့ငပဲကိုလျက်ပြုတာရော အလျင်စလိုမလုပ် တကယ့်ကို ငြင်ငြင်သာသာ။ ကျွန်တော်သိတယ် သူ ဒီထက်ပိုမိုပြင်းပြင်းပြပြလိုချင်နေမှန်း။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ငြင်သာနုညံ့ရွေ့လျားမှုကို နည်းနည်းကြာအောင်ပြုလုပ် ပေးမိ တယ်။ ကွမ်းသီးခေါင်းတစ်ဝိုက်ကိုလျှာဖြင့်ရစ်ပတ်ထိပ်ဝလေးကို စက်ဝန်းသဏ္ဌာန်လှည့်ပတ် အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ သက်ပြင်းမောချလိုက်သံကို ကြားရချိန်မှာတော့ ပါးစပ်ကိုဖွင့် သူ့ငပဲကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိ ၀င်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လည်မျိုထဲ အဆုံးထိသွင်းပြီး ခဏတော့ငြိမ်နေလိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ ခေါင်းကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားကာ လည်မျိုထဲအထုတ်အသွင်းလုပ်ပေးတာ ပေါ့။ အပြင်မရောက်တရောက်အခြေအနေမှာလည်း လျှာတွေ နှုတ်ခမ်းသားတွေသုံးကာ အားရပါးရစုပ်မှုတ်ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုတ် ဆုတ်သွားတဲ့ သူ့တင်သားတွေကို ကျွန်တော့်ဆီဆွဲယူပြီး အထုတ်အသွင်းနင့်နင့်နဲနဲလုပ်စေတာပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့သွေးသားဆာလောင်မှု တွေ စားသုံးခြင်း။
ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ဖီလင်အရှိန်မြင့်လာခြင်းကို ခံစားသိမိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့သုတ်ရည်တွေ ပန်းမထုတ်ခင် ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းလွှာ တွေထဲက ဆွဲထုတ်လိုက်ပါ၏။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ထူမတ်လိုက်ရင်း သူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုလှဲလျောင်းလိုက်တယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို ငုံစုပ်ရင်းကျွန်တော့်လက်ကတော့ မာတောင်နေဆဲ သူ့ငပဲကို ဆုပ်ကိုင်ကစားရင်း တစ်ချိန်တည်းမယ်။ သူ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းကို လက်နှစ် ဖက်ဖြင့် ဆွဲယူလိုက်ပြီးနောက် နမ်းတာများ ပြင်းပြတက်မက်စွာ။ ကျွန်တော့် သူ့ငပဲကို ကစားနေတာတော့ အရှိန်မပျက်စေပါဘူး။ အနမ်း ရှိန်တက်နေဆဲမှာ သူရပ်တန့်လိုက်တာကိုတော့ ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားရပါတယ်။ သူ ကျွန်တော်နှင့် ပိုမိုပူးကပ်လိုက်ပြီး နားရွက်နား ကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုးပြောတာက 'Fuck me' တဲ့။ လေသံသဲ့သဲ့လေးဖြင့်တောင်းဆိုခြင်း။
သူ့ခြေထောက်တွေနှင့် ကျွန်တော့်ခါးအစုံကိုချိတ်တွယ်လိုက်တယ် ဇာတ်လမ်းအသစ်တစ်ခု စတင်ဖို့လေ။ ကျွန်တော်လည်း ခုတင်းဘေး က ဘီရိုပုလေးထဲမှ condom တစ်ခုကိုယူပြီးဖွင့် မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲမှာ အသာစွပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ သူ့ခရေ၀လေး၌ ရှန်တိန်လုပ်ပြီး အစပျိုးရတာပေါ့။ အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းကောင်းမှ လျောကနဲ အဆုံးထိဖိသွင်းလိုက်တာ နှစ်ဦးသားနှုတ်ခမ်းများမှ ကျေနပ်အားရသံကိုယ်စီထွက်သွားမိရော။ နှစ်ဦးသား အပေးအယူမျှမျှ rhythm မိမိ လှုပ်ရှားကြတာပါ။ သူ့ခရေ၀တင်းကြပ်မှုက ကျွန်တော့်ငပဲကို ဖျစ်ညှစ်ထားသလို ခံစားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရင်ဘတ်တွေကလည်း ချွေးတစိုစိုဖြင့် slide ထိုးနေကြတာလေ။ လက် တွေ ခြေထောက်တွေကတော့ ထွေးယှက်လွန်းတင်နေကြသည်ပေါ့။ သူ့နှုတ်ခမ်းနှင့် ထိကပ်လို့ရတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးသာ မက လည်တိုင်တွေကို တံဆိပ်နှိပ်သပေါ့။ ကျွန်တော့်နားရွက်တွေကို ပွတ်သပ်ထိတွေ့ရင်း ကစားတာ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မနေတတ်။
ကျွန်တော့်ဆောင့်သွင်းချက်တွေမြန်ဆန်လာပြီး မကြာခင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သူ့ကိုကျွန်တော်သတိပေးရင်း ဘ၀မှာထပ်ပြီး ထွက်စရာ မရှိတော့လောက်အောင် သုတ်ရည်တွေကိုပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ သူလည်းသူ့ငပဲကို ကစားရင်းမှ ပြီးဆုံးသွားတယ် အလားတူ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံး အပြေးပြိုင်ပွဲမှာပန်းဝင်လာသို အသက်ကြိုးစားရှူသွင်းရတယ်။ ကျွန်တော် သူ့နံဘေးကို စောင်းလှဲလိုက်ရင်းလေကို ၀၀ပြန်ရှူဖြစ်သပေါ့လေ။ အံ့အားသင့်စဖွယ်လိင်ဆက်ဆံပတ်သက်မှုကြောင့်ရော နုညံ့တဲ့ခံစားမှု ပါဖြစ်တည်လာတာကြောင့် သူ့ပါးပြင်လေးအား ငြင်သာစွာအနမ်းပေးလိုက်ပါ၏။
မွေ့ယာပေါ်လှဲရင်း ဘေးကိုလှည့်လိုက်ကာ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ 12:02 am.
Alex Aung (6 March 2011)
Posted by Alex Aung at 7:04 PM